प्रधानमन्त्री | रिपोर्टर्स नेपाल रिपोर्टर्स नेपाल
प्रधानमन्त्रीको तेस्रो डायलासिस
काडमाडौं,१ मंसीर । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मिर्गौलाको कार्यक्षमतामा ह्रास आएपछि पुनःहेमोडायलासिस गरिएको छ । ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पलातमा शनिबार उनको तेस्रो पटक डायलासिस गरिएको हो ।
अतिक्रमित भूमिबारे प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीसँग संवाद गर्ने
काठमाडौं २४ कार्तिक । अतिक्रमित भूमिबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग संवाद गर्ने तयारी गरेका छन् । उनले आज आन्तरिक छलफल गरेर भारतमा सन्देश पठाउने बुझिएको
प्रधानमन्त्री सचिवालय फेरिँदै
काठमाडौं, कात्तिक २४ । काम चित्तबुझ्दो नभएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सचिवालय हेरफेर गर्न लागेका छन् ।यसका लागि उनले सचिवालयका सवैलाई राजिनामा गर्न भनेका छन् । ‘आफ्नो काम सहजताका
प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अस्गर अलीमाथि कारबाही हुने
काठमाडौं, २३ कात्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अवैतनिक सूचना तथा प्रविधि (आइटी) विज्ञ अस्गर अलीले राजीनामा दिनुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था बनेको छ । उनले विभिन्न सरकारी निकायसँग रहेको डाटा आफ्नो
प्रधानमन्त्रीको सक्रियता बढ्दै
काठमाडौं, कात्तिक २३ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाहिर हुने झिनामसिना र उपलब्धिहिन कार्यक्रम छाडेर मुख्य–मुख्य काममा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न थालेका छन् । क्रमशः स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले वालुवाटारमा
प्रधानमन्त्रीको उपचार: डायलासिस कि प्रत्यारोपण ?
काठमाडौं १८ कार्तिक ।मिर्गौलाले काम गर्न छाडेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपचार अब कसरी गर्ने भन्नेबारे आइतबार पनि टुंगो लागेन । अघिल्लो साता सुरु गरिएको डायलाइसिसलाई नै निरन्तरता दिने कि नयाँ
प्रधानमन्त्री ओलीले भने : मिर्गौलाले दुःख दियो, सिकिस्त विरामी छैन’
काठमाडौं १७ कार्तिक ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मिर्गौलाले काम नगरेकाले नियमित डायलासिस गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । सत्तारुढ नेकपाको शनिबार बसेको सचिबालय बैठकमा ओलीले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे ब्रिफिङ
डा. चक्रराज पाण्डे: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको स्वास्थ्य अवस्था एकदमै राम्रो छ । उहाँको स्वास्थ्यका विषयमा चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था मैले देखेको छैन । उहाँको डायलासिस डा. दिव्या सिंह शाहको लिडरसिपमा
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्दैन, डायलसिस गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ- डा. शेखर कोइराला, नेता, नेपाली काँग्रेस
काठमाडौं, १६ कात्तिक । नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइराला पेशाले चिकित्सक पनि हुन् । उनीसँग देशको समसामयिक राजनीति र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यवस्थाबारे नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यवस्थाबारे चासो र चिन्ता, के छ अवस्था
काठमाडौं, १४ कात्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बुधबार विहान अचानक अस्पताल भर्ना भए । उनलाई ग्रान्डी अस्पतालको आइसीयूमा राखियो । १२ वर्ष अघि मृगौला प्रत्यारोपण गरेपछि नियमित स्वास्थ्यजाँचका लागि
डा. मीनेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चेतावनी दिए- कसैलाई कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्रीले होइन (भिडियोसहित)
काठमाडौं, १३ कात्तिक । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजालले कसैलाई कारबाही गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नभएको भन्दै जथाभावी कारबाही गरेर नहिंड्न चेतावनी दिए । प्रधानमन्त्रीले अदालत
प्रधानमन्त्रीसहितको टोली स्वदेश आइपुग्दै
काठमाडौं, कात्तिक १० । अजरबैजानको राजधानी बाकुमा आयोजना भएको असंलग्न आन्दोलन (नाम) राष्ट्रहरूका राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार प्रमुखहरूको १८औँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहितको टोली आज स्वदेश आइपुग्दैछ ।